“Ho an’ireo Tsy Mahavita Intsony Mandeha Mifidy Amim-pahavitrihana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2015 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, македонски, Ελληνικά, Français
Biletàm-pifidianana nandritry ny fifidianana izay ho filoha – CC-BY-20
Ny 23 Aprily 2017 no hatao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izay ho filoha ao Frantsa, ary ny 7 May ny fihodinana faharoa. Ho henjankenjana ihany no fahitàna an'ireo fifidianana ireo raha toa ka tarafina amin'ny rivotra sosialy amin'izao fotoana izao ao Frantsa. Efa ahitàna sahady ny lokony ireo fanambaràna an-tendrony/henjana any anaty fampitàmbaovao ataon'ny sasany amin'ireo mpanao politika, indrindra fa momba ny olan'ny mpitsoa-ponenana. Nadine Morano avy amin'ny antoko Repoblikana, izay manamafy fa ” i Frantsa dia firenena jodaisma-kristiana ho an'ny fotsy hoditra“, dia ohatra iray ihany amin'ireo hafa rehetra raha resaka fivoaran'ny fambaboana fon'olona amin'ny kabary fandresena lahatra ataon'ireo lehilahy sy vehivavy mpanao politika ao Frantsa.
Kanefa, betsaka ireo hetsiky ny olontsotra ao Frantsa mitady ny hisintonana ny demaokrasia ao Frantsa hiala amin'io tangolika mitambotsitra mitsotsorika misy azy io ary hanome ny demaokrasia ny mariboninahitra tokony ho azy.
Ireto ny hetsika roa izay mandà ny fihoaram-pefin'ny politikan'ny fambaboana fon'olona ary maniry ny mba ho fomba hafa no hanaovana politika :
Ny hetsika “Ma Voix” (Ny Feoko)
Nanao tombana ity vondron'olon-tsotra ity hoe tsy vitan-dry zareo intsony ny hiandry hoe ireo politisiana no hanova ny fomba fanaony ka nanapaka hevitra ry zareo fa hirotsaka an-tsehatra hanova zavatra. Ao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo, hazavainy ny anton'ny dingana ataony:
Ao anatin'ireo tsy mahavita intsony mandeha mifidy amim-pahavitrihana izahay.
Ny sasany aminay aza tsy mandeha mifidy intsony mihitsy, ny sasany manao vato fotsy, manao izany tsy sazoka sisa ireo mbola tonga mifidy, amin'alahelo na hatezerana.
Mahatsiaro ho voafandriky ny rafitra politika izay tsy manaja antsika akory izahay, izay tsy mihaino antsika, ary tato anatin'ny fotoana vitsivitsy, lasa rafitra mankaloiloy anay noho izao tsy fitandremana, ireo fialàna andraikitra, ireo fampanantenana tsy tanterahany velively, ny laingany, ny tsy fijereny ny maha-olona.
Maro rantsana izahay.
Samihafa daholo izahay rehetra.
Tsy ny zavatra rehetra no hitovianay hevitra. Ary izany no harena ho anay. Ny zavatra niainanay no manaporofo fa mbola betsaka ny làlana azo izorana mba hahazoana vokatra mivaingana.
Tianay andramana. Miandàlana.
Mihetsika izahay. Natsahatray ny fiandrandràna amim-panantenana fotsiny ny any ambony any. Tsy misy tokony ho andrasana intsony amin'ireo izay mitondra antsika. Tsy fahombiazana no hitanay, lazainay tsy misy fankahalàna izany, na hatezerana.
Ary farany, samy tsy nahomby izy rehetra nifandimby teo, satria efa fepetra tamin'ny taonjato lasa no nampiasaina, tsy sahaza intsony.
Ho an'ireo antoko politika , tsy hanao sonia taratasim-bola tsy misy soratra intsony izahay.
Hamorona tolotra politika mifanaraka amin'ny tontolo arafitsika isanandro vaky isika : malalaka, mifandray, miaraka miasa, miafampiankina, mivaingana.
Efa misy mpikambna maherin'ny 3000 sahady ny hetsika “Ma Voix” tao anatin'ny andro vitsy ary mifamory matetika any amin'ireo tanan-dehibe ao Frantsa (Nantes ary tsy ela akory izay ny tao Parisy).
“Tianay hahena ho 10% sisa ny tahan'ny tsy fandraisana anjaran'ireo tanora eo amin'ny 18-25 taona amin'ny 2017″ – Projet Voxe.org
Ny Tetikasa Voxe.org
Ao amin'ny tranonkalan-dry zareo, avoitran'ny Voxe ny fahitàna tsy azo lavina momba ny demaokrasia sy ny vahaolana aroson-dry zareo :
Frantsay 7 amin'ny 10 no mihevitra hoe tsy miasa tsara araka ny tokony ho izy ny demaokrasia.
Ny fandaharanasanay : manao izay hahafahan'ny olom-pirenena manana ny feony amin'ny politikan'ny fireneny.
Ao anaty lahatsary iray ao amin'ny YouTube, hazavain'ny filoha sady mpiara-mamorona ny Voxe.org, Léonore de Roquefeuil, ny antom-pisian'ilay tetikasa :
Hazavain'ny tariky ny Voxe.org amin'ny antsipirihany ny fomba eritreretin-dry zareo hatao hanomezana indray ny feo ho an'ireo olom-pirenena, amin'ny alàlan'ny teknolojia niomerika :
Manoloana ny fitomboana tsy mitsahatry ny tsy fandehanana mifidy – indrindra fa amin'ireo tanora – efa hatramin'ny 2012 ny Voxe no miara-dàlana amin'ireo mpisera ety anaty aterineto, mba hahatonga ny politika ho zavatra mora vakiana…. Ny sehatra tsy miandany nataonay ho fampitahàna fandaharanasa dia fitaovana iray mangarahara, azo ao amin'ny tranonkala www.voxe.org. In-3 manapotsitra fotsiny dia efa olom-pirenena 3 tapitrisa miparitaka aminà firenena 12 no manao fampitahàna ny tolokevitr'ireo mpihazakazaka hofidiana:
ho an'ny fifidianana aminà lohahevitra samihafa. Atolotray ireto :
1. Fampitambaovao tsy miandàny ary mijery mahitsy miainga avy amin'ny angon-drakitra azon'ny rehetra idirana malalaka
2. Fahafahana mifidy ‘eny’ na ‘tsia’ ho an'ilay tetikasa
3. Fahafahana miditra aminà làlana handraisana andraikitra, toy ny fanaovana sonia fitakiana, firotsahana anaty fikambanana, na ny fomba hifandraisana amin'ilay (ireo) voakasik'izany.
Mbola misy hetsika hafa ataon'olontsotra mba hanandramana mitondra fanovàna ny demaokrasia ao Frantsa (Démocratie Ouverte, ny tetikasa Let me Vote an'ny “Européens sans Frontières”, sns.). Raha jerena ireo kabary miverimberina any anaty fampitambaovao nahazatra hatrizay, dia tsikaritra fa mbola ho lavitra ny làlana ho an'ireny tetikasa ireny alohan'ny hamerenana ny demaokrasia ao Frantsa ho amin'ny làla-mahitsy.